Xatooyada xogta Ruushka: Duni dahsoon oo ay wax kasta iib yihiin - BBC News Somali
Image caption Baasaboorka Ruushka
Caalamka ayaa sanadihii dambe ka walaacsanaa xogta ay xadaan kooxaha Ruushka ah ee u dhaca kombiyuutarada, balse BBC-da ayaa ogaatay sida ay u fududahay in la iibsado xogta shakhsiga ah sida tan baasaboorrada iyo macluumaadka koontooyinka bangiyada ee gudaha Ruushka.
Sida ay sheegeen khubaro ammaanka internet-ka ah, xog badan oo gaar ah, ayna kamid yihiin kuwa hay'adaha dowladda Ruushka ayaa la kala iibsadaa maalin kasta.
Subax kamid ah bishii January 2018, Roman Ryabov ayaa muddo kooban ka maqnaa xafiiskii oo ku yaal magaalada Tula ee koonfurta Ruushka, si uu sigaar usoo dhuuqo. Waxa uu u shaqeynayay shirkadda Beeline oo ah tan ugu weyn ee isgaarsiinta telefoonnada gacanta ee Ruushka.
Waxaa la kulmay nin aanu horay u aqoon oo lagu magacaabo Andrei Bogodyuk, kaasoo durbadiiba usoo bandhigay qorshe ganacsi. Waxa uu ka doonayay Ryabov inuu eego diiwaanka telefoon ee qof uu yaqaanay.
Gelinkii dambe ee maalintaas, Ryabov ayaa Bogodyuk u diray liis ay ku qoran yihiin wicitaannada iyo taariikhda la sameeyay, waxaana hawshaasi lagu siiyay lacag dhan 16 dollar.
Ryabov ayaa sidoo kale ninkaasi ay isbarteen u diray xogta laba lambar oo kale. Balse isla goortaasiba shirkadda Beeline ayaa dareentay in xogteeda loo dhacay, waxaana ay ku wargelisay booliska.
Labada nin ayaa la soo qabtay, waxaana lagu xukumay inay bulshada u adeegaan. Bogodyuk 340 saacadood, halka Ryabov lagu xukumay 320 saacadood.
Ganacsiga sharci darrada ah ee xoogeysanaya
Qaabka uu xogta u xaday Ryabov ayaa hadda ka ah Ruushka mid laga soo tegay.
Waayahan dambe, baarayaasha gaarka ah, kuwa dadka khiyaana ama xitaa ragga masayrsan ayaa heli kara adeegga kooxaha kombiyuutarada u dhaca, kuwaasoo u keeni kara xogta ay doonayaan.
Waxaa kobcaya suuqa lagu kala iibsado xogta gaarka ah ee Ruushka. Qiimo jaban ayaa waxaad ku heli kartaa diiwaanka telefoonnada, cinwaannada guryaha, xogta baasaboorrada iyo xitaa furayaasha sirta ah ee bangiyada.
Image caption Qolyaha internetka jabsada ayaa iibiya xogta gaarka ah
Kooxaha sida sharci darrada ah xogta u hela ayaa leh qeybo laga heli karo xogta hay'adaha dowladda, sida Adeegga Canshuuraha Federaalka.
"Haddii ay jirto baahida, lacagna laga samayn karo, dabcan waxaa soo baxaya dad doonaya inay fuliyaan hawshaasi," ayuu yiri Harrison Van Riper oo cilmi-baarista u qaabilsan shirkadda ammaanka internet-ka ee Digital Shadows.
Dalalka oo dhan ayay ka dhacdaa in la dusiyo xogta rasmiga ah. Shakhsiyaadka hawlahaasi ku caan baxay waxaa kamid ah Edward Snowden oo u shaqeynayay Hay'adda Ammaanka Qaran ee Maraykanka (NSA), kaasoo 2013 baahiyay xog ballaaran oo ku saabsan hawlaha basaasidda ee Maraykanka.
Balse waxa Ruushka uu dalalka kale kaga duwan yahay ayaa ah habka fudud ee uu qofka caadiga ah ku heli karo xog qarsoodi ah oo ay hayaan laamaha dowladda.
"Dhibaatooyinka musuq maasuqa iyo inaanay jirin cid kontoroosha helitaanka xogta ayaa sabab u ah arinkaa," ayuu BBC-da u sheegay Mark Galeotti oo ka tirsan mac-hadka Royal United Services Institute.
Habacsanaan dhanka isla xisaabtanka ah
Inta badan ma dhacdo in Ruushka uu maxkamadeeyo dadka iibiya xogta xasaasiga ah, balse marka ay taa dhacdo waxa halkaa kaaga cadaanaya qaabka ay hawshaasi u socoto iyo sababta aan loo joojin.
Sanadkii 2016, waxaa caasimadda Moscow lagu maxkamadeeyay oo dembi lagu helay kuxigeenka madaxa xafiiska degmada Vidnoye uu ku leeyahay Adeegga Canshuuraha Federaalka, kadib markii uu xog ku saabsan dhakhliga iyo dhaqaalaha dad Ruush ah ku iibsaday 7,000 oo lacagta dalkaasi ah.
Waxaa lagu xukumay ganaax iyo xabsi, balse labaduba waxaa laga cafiyay maalinta loo dabaaldego Guushii Ruushka.
Xogta sida sahlan lagu helayo ayaa xitaa saamaysay sirdoonka Ruushka sida lagu ogaaday baaritaanka ay samaysay BBC-da.
Sanadkii hore, mas'uuliyiinta Holland ayaa baahiyay magacyada dhowr qof oo ay sheegeen inay wax basaasayeen. Magacyadaasi ayaa waxaa laga baaray diiwaanka gawaarida ee dalka Ruushka, kaasoo ay ahayd inay si wanaagsan u xafiddo wasaaradda arimaha gudaha, balse loo dusiyay shirkaddo gaar loo leeyahay.
Waxaa si fudud lagu ogaaday cinwaanka ay shakhsiyaadkaasi ku nool yihiin, kaasoo ah dhismo ay leedahay hay'adda sirdoonka u qaabilsan milateriga Ruushka ee GRU.
Arintaasi ayaa ceeb ku ahayd dal uu hogaamiyo Vladimir Putin, oo mar ahaa sarkaal mukhaabaraadka u shaqeeya, isla markaana ku faana shaqo wanaaga iyo sirta hay'adihiisa wax basaasa.
Haseyeeshee laamaha ammaanka ee Ruushka ayaa wajahaya loollan awood badan. Saraakiisha hay'adahaasi ayaa inta badan hela mushaar aan ku filnayn, waxaana ay ku kabaan iibinta xogta ee suuqa madow.
Si aan u ogaano sida ay u fududahay in la helo xogta gaarka ah, ayaa BBC-da qeybteeda Ruushka waxa ay la xiriirtay koox online ku shaqeysata, waxaana ay ka dalbatay xogta shakhsiga ee mid kamid ah weriyayaasheeda.
Isla maalintaasi ayaa lacag ka yar 2,000 oo roubles waxaa loogu soo diray email ay ku lifaaqan yihiin dukumiintiyo muujinaya baasaboorka uu hadda wato, iyo weliba kii uu qaatay markii uu 14 jirka ahaa.
Image caption Xogta baasaboorka weriyaha BBC Russia
Ma aha muwaadiniinta Ruushka oo keliya kuwa xogtooda la iibsan karo. BBC-da qeybteeda Ruushka ayaa dalbatay in loo keeno xogta xaaska mid kamid ah weriyayaasheeda oo u dhalatay Midowga Yurub, waxaana loo soo diray xogta wicitaannada ay samaysay, taariikhda ay dhalatay iyo macluumaadka baasaboorkeeda.